မှတ်ပုံတင် မလိုချင်ပါ No registration | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မှတ်ပုံတင် မလိုချင်ပါ No registration
မှတ်ပုံတင် မလိုချင်ပါ No registration
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 28, 2011 in Myanma News |9comments
ပြောင်သူလွှတ်တော်က နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် အတည်ပြုလိုက်တယ်လို့ RFA သတင်းမှာ ဖတ်ရလို့ လက်တန်းကောက်ရေးလိုက်တယ်။ ပြင်လိုက်တဲ့ အဓိက အချက်သုံးချက်မှာ (၁) အရင် ဥပဒေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ နိုင်ငံရေးပါတီဝင် မဖြစ်ရဆိုတဲ့ အချက် ဖျက်သိမ်းပြီး၊ (၂)၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို “ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး” အစား “လေးစားလိုက်နာရေး” နဲ့ အစားထိုးတယ်။ (၃) မှတ်ပုံတင်မယ့် ပါတီတခုဟာ အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ်မြေ (၃) ခု ကိုယ်စားပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမယ်လို့ပြောင်းလဲထားတယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးဂေါက်ပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ၅၀ လစ်လပ်တယ်။ http://www.rfa.org/burmese/news/parliament-10272011235203.html မဇ္ဈိမသတင်းမှာတော့ နေရာသုံးနေရာ သတ်မှတ်ချက်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွန် နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ မသက်ဆိုင်လို့ ရေးထားတယ်။ (၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော “နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း” ဥပဒေဟောင်းတွင် ပါတီဝင်များသည် ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသူများ မဟုတ်ရဟု ကန့်သတ်ထားချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီ ဖြစ်သလို ပါတီတခုသည် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အနည်းဆုံးသုံးနေရာ ဝင်ပြိုင်ရမည်ဟု ကန့်သတ်ထားချက်ကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ပေါက်လာသော ပါတီသစ်များနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိဟုလည်း ပြင်ဆင်လိုက်သည်။) http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8549-2011-10-27-14-09-58.html သတင်း ဌာနနှစ်ခု နှစ်မျိုးကွဲနေတာတာ့ မမိုက်ဘူး။ မဇ္ဈိမသတင်း မှန်ရင်တော့ ဝမ်းသာစရာပဲ။
အန်အယ်ဒီအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်မတင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မဝင် အမေးခံရတဲ့အခါ ဒေါ်စုက ဥပဒေအဖြစ် လွှတ်တော်ထဲကနေ မထွက်လာသ၍ မပြောနိုင်သေးလို့ တောက်လျောက် အရှင်ဖွင့်ထားခဲ့တာပါ။ အခုတော့ ငမိုက်သားလွှတ်တော်မှ ဥပဒေအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပါပြီ။ ဘာဆက်ဖြစ်မယ် ထင်သလဲ။ လတ်တလော သတင်းများအရတော့ ရာသီဥတု မကောင်းဘူး၊ နိုင်ငံရေး ရေချိန်မြင့်နေတယ်။ အမေရိကန် အထူးသံတမန် Derek Mitchell ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ကြိုဆိုပေမဲ့ ပိတ်ဆို့မှုများ လုံလောက်မှု မရှိလို့ ဆိုထားတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၄ရက်နေ့ ဝေါစထရိသတင်းစာ တွေ့ဆုံခန်းမှာ ဒေါ်စုက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု မရုပ်သိမ်းသင့်သေးကြောင်း အချက်ပြထားတယ်။
တချိန်ထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံက ပင်လယ်ရပ်ခြား ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ ပြန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ ဆိုနေတယ်။ အိန္ဒိယကလည်း ဒေါ်လာ သန်းငါးရာကျော် ချေးမယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ အာဆီယံအသင်း ဥက္ကဌရာထူးအတွက် ဆွေးနွေးဖို့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နေပူတောကို မကြာခင် လာတော့မယ်။ ဥရောပအီးစီအဖွဲထဲမှာ စစ်အစိုးရကို ကူညီလိုသူများ ရှိပေမဲ့ ယခုထက်ပို ဖွင့်ပေးဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ထဲထဲ ဝင်ဝင် ထောက်ခံတဲ့ အင်္ဂလန်လို နိုင်ငံမျိုးက တောင့်ခံထားရင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံး သဘောတူမှ ချမှတ်လို့ ရတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာ ပေါ်လစီအပြောင်းအလဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီမူကြောင့်ပဲ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပိုပြင်းထန်တဲ့ အီးယူ ပိတ်ဆို့မှုများ မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ အီးယူအနေနဲ့ သူ့အစုအလိုက် လှုပ်ရှားခြေရှုပ်ကြ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဗွီဗွီ ယာယီညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးဟန်ညောင်ရွှေကို မြန်မာပြည် ပြန်စေသလိုမျိုး၊ အန်ဒီအက်ဖ်ကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးသလိုမျိုး၊ မြန်မာအီးဂရက်စ် ဦးနေဝင်းမောင်တို့လို စစ်အုစုပ်လိုသူများကို ထောက်ပံ့ပေးသလိုမျိုးတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အရင်ကလို လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်မရ တုပ်ချည်မိနေတာ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ထိုးစစ်ဆင်မှုများ တန့်နေတာ ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်အခက် ဗမာ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မနှေး ပါနဲ့လို့ ရဲရဲတောက် ကြောင်ကြီး ခြုံကွယ်ကြားမှ အားပေးတယ်။ တရားမဝင် နအဖအမွေခံ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရကို ဆက်ဆံတာနဲ့တင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနဲ့ လဲလှယ်ဖို့ လုံလောက်ပြီ။ (ဒေါ်စုက ပြောထားတယ်၊ ၁၉၉၀ ရလဒ်ကိုင်စွဲနေခြင်းသည် အာဏာလွှဲပြောင်းရေး မဟုတ်ဘဲ အသိအမှတ်ပြုခိုင်းတာပါ၊ စစ်အုစုပ်နေသူများ တံတွေးသီး၊နေမှာစိုးလို့ ပြောပါတယ်)။
ရွေးဂေါက်ပွဲဝင်မှ မှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝကန့်ကွက်တယ်။ ၁၉၉၀ခုနှစ် တုန်းကလည်း နိုင်ငံရေးပါတီများ မဝင်မနေရ သုံးနေရာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ရတယ်။ အခြေအနေခြင်းက မတူတော့ဘူး။ ဟိုးအရင်က ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်မရှိခဲ့သေးဘူး။ ဒီနေ့မှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် အထင် အရှားရှိနေပြီ။ ၁၉၉၀ခုနှစ် အောင်ပွဲအတွက် လူထောင်ပေါင်းများစွားရဲ့ ဘဝတွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရ၊ ပေးဆပ်နေရဆဲ ဖြစ်တယ်။ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ လစ်လပ်နေရာ နေရာ၅၀ပဲရှိတယ်။ အကုန်နိုင်တောင် ဝါးတီးကုတ်ဝတ်၊ ခေါင်းပေါင်းဆောင်း ခြင်းထက် မပိုနိုင်ဘူး။ ဒါအတွက်နဲ့တော့ နှစ်၂၀ကျော် ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ ဒီမိုကရေစီတပ်ဦးနေရာကို လဲမယ် မထင်ပါ။ အန်အယ်ဒီဖက်က လိုတာထက်ပို လိုက်လျောပြီးသွားပြီး ပြင်ရမှာ စစ်တပ်ဖက်က ဖြစ်တယ်။
အန်အယ်ဒီအနေနဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ လူထုရဲ့ နစ်နာမှု၊ လိုလားမှုများအတွက် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးပါ။ လှုပ်ရှားမှုရှိရင် တိုက်ပွဲဆိုတာ ဖြစ်မှာပဲ။ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး ချွင်းချက်မဲ့ လွတ်မြောက်ရေး၊ ပြည်တွင်းစစ် ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုများနဲ့ ခရီးဆက်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ပါတီရံပုံငွေရှာပွဲများ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ လုပ်သင့်တယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အကြို စည်းရုံးရေးကာလမှာ မြို့နယ်ရုံးများအလိုက် ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲများကို အမှတ်ရတယ်။ မှတ်ပုံမတင်ရင်တော့ ပြသနာရှိနိုင်လို့ သူပိတ် ကိုယ်ဖွင့်၊ သူနှောက် ကိုယ်ခြောက်နိုင်ဖို့လိုမယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ပေးလာတဲ့ နိုင်ငံတကာ အနေအထားကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချပါ။ မိမိက လူကြီးလူကောင်း သိပ်ဆန် နူးညံ့ပြနေရင် တဖက်က ရူးချင်ယောင်ဆောင် အချောင်တီးသွားမယ်။ ဒေါ်စု စကားတခွန်းဟာ သုံးတတ်ရင် ညူကလီယားဗုံး ဖောက်သလို ပြင်းထန်အားကြီးပါတယ်။ ဗုံး…ခွဲ….ပစ်….လိုက်….ပါ။
မှတ်ပုံတင်မယ်ထင်မိပါတယ်..။ ဒါက မြန်မပြည်တွင်း လူအများစုဆန္ဒလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းမိတယ်..။
မှတ်ပုံတင်ပြီး…ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် ပြိုင်ဦးမယ် ထင်ပါတယ်..။ (ဒါကသိပ်မသေချာပါ)
မင်းကိုနိုင်တို့ကို.. မှတ်ပုံတင်မယ်ကြေငြာပြီးရင်လွတ်မလား.. .ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ပြီးမှ လွှတ်မလားတော့.. မသေချာပါ..။
လွတ်နေတဲ့ အမတ်နေရာအားလုံးကို NLD ကရလိုက်နိုင်ရင်.. အခြေအနေတော်တော်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်..။
အာဏာရအစိုးရ(ပါတီ)က.. ဖိနှိပ်တာတွေ ဆက်လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
NLD က.. ဆန်ရှင်လွတ်အောင် လုပ်ပေးရမှာနဲ့.. ပြန်ကစားရနိုင်ပါတယ်..။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက.. ဒေါ်စုဟာ.. အကျယ်ချုပ်ပေမဲ့.. (အမှတ်မမှားရင်) အပြင်က လူငယ်အဖွဲ့ လျှို့ဝှက်သွင်းလိုက်တဲ့စာဖတ်ပြီး.. အချိန်အတော်ကပ်မှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒါကြောင့် အခုမြင်ရတဲ့..ရွေးကောက်ပွဲနိုင်.. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မြင်နေရတာပေါ့….။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကတော့.. NLD က ၀င်ပြိုင်ဖို့ကို အခွင့်အလန်းမရလိုက်(မပေးထား)တာပါ..။
ဒီမိုကရေစီမကျတဲ့ အခြေခံဥပဒေအောက်မှာ ဒီမိုကရေစီမကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါလို့ မတိုက်တွန်းလိုပါဘူး..။
ဒေါ်စုနဲ့ NLD တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် ရတဲ့နေရာ၊ ရတဲ့အခွင့်အရေးက စလုပ်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင်ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ရင်ဖြစ်စေ ကာယကံရှင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နားလည်အသိအမှတ်ပြုပါတယ်..။
ရွေးကောက်ပွဲကတော့ ပြောဘို့ စောနေပါသေးတယ်။
စစ်တပ်ဘက်က (စိတ်မပါရင်တောင်) လုပ်ပေး ပြင်ပေးစရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို တမင်ဖယ်ထားတာလဲ အလုပ်မဟုတ်သေးဘူး။
ပါတီမှတ်ပုံတင်ဘို့ကတော့ လိုအပ်လာပြီလားလို့ ထင်ပါတယ်။
အခုက NLD ကိုထောက်ခံချင်ရင်တောင် ပံ့ပိုးချင်ရင်တောင် ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့်နဲ့
ဒီကြားထဲမှာ အရေးအကြောင်းတခုခုရှိလာရင်လဲ(ဥပမာ ရွှေဝါရောင်ကိစ္စမျိုး)
နိုင်ငံရေးအရ ပြတ်ပြတ်နဲ့ တင်းတင်း ၀င်ရပ်ပေးဘို့ လိုအပ်မှာပါ။
ဖတ်တော့ ဖတ်လိုက်ပါတယ် ။ ပြောသွားတာတွေကိုလည်း…. သဘောတူပါတယ် ။ လက်ခံပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်..
ဘယ်လို ဝေဖန်ရမှန်းမသိလို့comment မပေးသွားတော့ပါဘူးဗျာ…။
ဘွားတော် ဘာစိတ်ကူးပေါက်သည် မသိ။ မကြာခင် ရက်ပိုင်းမှာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိခွင့်ရမည် ထင်ပါသည်။ နာဂစ် အခြေခံ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ မပြင်ဘဲနှင့် ဝင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်….. အင်း..ကိုယ့်တပ်ကိုယ် ပြန်နင်းသူအဖြစ် သမိုင်းအတင်ခံရပါစေနဲ့ လို့သာဆုတောင်းပါ၏…။
NLD ပါတီက ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲက အချက်တချို့ကို လွှတ်တော်ကနေ ပြင်ဆင်ချက် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် NLD ပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေတာလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်ရွက်မှုအတွက် NLD ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်းက- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်ကြောင်း၊ မိမိ အနေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တာကို မြင်လိုပါတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောဆိုတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယူအက်စ်က.. ရှေ့သမ္မတနဲ့ အခုသမ္မတတက်တော့.. စစ်ကြီး၂ခုကို ၇င်ဆိုင်နေခဲ့ရတယ်..။
အခုအဆုံးသတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့.. စစ်တွင်းကာလပဲ..။ wartime လို့သတ်မှတ်ပြီး.. ဥပဒေတွေပြဌာန်းရာမှာ.. အမြဲထည့်စဉ်းစားရတာပဲ..။
wartime မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့အေ၇းကြီးတဲ့.. ဥပဒေလုပ်ထုံးတွေ.. အမြတ်ခွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ထုံးတွေတွေပါ.. စစ်တပ်ဦးစားပေး ဆွဲရတာပဲ..။ စစ်တပ်က.. တရားရေးကိုပါ..အများကြီး.. လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်..။
အမေရိကားရောက်နေတဲ့သူတွေ.. ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအမိန့်နဲ့.. ဂရင်းကဒ်တောင်မလိုပဲ.. စစ်ထဲတန်းဝင်..၁နှစ်အတွင်းဂရင်းကဒ်. .နောက်နိုင်ငံသားပေးပစ်တယ်ဆိုတာ..wartime ကာလမို့.. ရတဲ့ အခွင့်အေ၇းတွေပေါ့..။
ဒါကို ပြင်ချင်၇င်.. ပြည်တွင်းစစ်တွေအရင် အဆုံးသတ်ပေးရမှာလို့ထင်တယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ…စစ်ကိုမုန်းတဲ့… နိုင်ငံသားတိုင်း.. ထိပ်တန်းဦးစားပေးလုပ်ရမှာက.. ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးလို့ ထင်တာပဲ..။
စစ်မတိုက်နေရင်.. စစ်တပ်အခန်းကဏ္ဍ အလိုလို ကျသွားမှာပါပဲ..။
အမေရိကန်မှာ စစ်ထဲဝင်ရင် တနှစ်နဲ့ ဂရင်းကတ်ပေးတာ စစ်တိုက်မဲ့သူ မရှိလို့၊ မြန်မာပြည်မှာလို စစ်ထဲရိုက်သွင်းမရလို့ wartime ဥပဒေသုံး လုပ်ပေးရတာ။ wartime အစစ်နဲ့ လာမရောနဲ့။
မြန်မာပြည်သည် စစ်ပွဲကာလ ရောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ ဟိုးအဝေးကြီးမှာ။ စစ်ကောင်များ ပြောသလို တိုင်းပြည် အေးချမ်းသာယာ ဖွံ့ဖြိုးနေချိန်မှာတောင် စစ်တပ်က အကုန်စီးထားရင်၊ အချိန်မရွေး အာဏာသိမ်းခွင့်၊ အကန့်အသတ်မဲ့ စစ်ဗိုလ်အမတ်များ ပါလီမန်မှာ ၂၅% မောင်ပိုင်စီးခွင့်၊ သမတထက်ပိုတဲ့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမား သတ်မှတ်မှုမရှိ စတာတွေနဲ့ တဖက်စောင်းနင်းအုပ်ထားရင် စစ်ပွဲကာလရောက်တဲ့အခါ အတိုက်အခံများအားလုံးကို ရှေ့တန်းပို့ မိုင်းနင်းခိုင်းလိမ့်မယ်။
သဂျီးအပါအဝင် နိုင်ငံရေးသမား အချို့ပြောနေတဲ့ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာ လက်ရှိအနေအထားနဲ့ကိုယ်ပဲ စစ်အစိုးရက သူ့ဥပဒေသူ လိုက်နာနိုင်မှ မျှော်လင့်ချက် ပျပျလေးရှိတယ်။ ဘယ်ကောင် အာမခံသလဲ။ ဖြစ်လာတော့မှ လက်ရှောင်သွားမဲ့ အချောင်သမား၊ စားဖား ငကြောက်တွေချည်ပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လိမ်ညာမဲခိုးခဲတာ ထားအုံး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမှာ ပြောထားတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ၁၀% သဘောတူချက်နဲ့ ကိုယ့်နယ်က အမတ်ကို recall လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ပါတယ်။ အန်အယ်ဒီအနေနဲ့ နိုင်ငံတဝှန်း မဲဆန္ဒနယ်များမှာ လက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်များကို ပြန်ဖြုတ်ချဖို့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း စမ်းသပ်သင့်တယ်။ ဒါမှ လွှတ်တော်တွင်း နိုင်ငံရေး ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် သိရတော့မပေါ့။
အန်အယ်ဒီသာ ရွှေဂုံတိုင် ကြေငြာချက်ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး လွှတ်တော်တက်မယ်ဆိုရင် ဝမ်းနည်းလို့ ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုဆို ဘာလို့ အစောကြီးကထဲက တင်းခံနေသလဲ။ ဟိုးအရင်ကထဲက အာဏာခွဲဝေရေးလမ်းကြောင်း လိုက်ပါတော့လား။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဖိုက်တာယောင်ယောင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်သမားယောင်ယောင်နဲ့ အခုမှ လွှတ်တော်တက်ပါမယ်ဆိုရင် ရာဇဝင်မှာ စာအတင်ခံရမယ်။ မကြာခင်မှာ အကျိုးအကြောင်းနဲ့ အန်အယ်ဒီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သိရတော့မှာပါ။ အခုအချိန်အထိတော့ ကျုပ်တို့လည်း ထင်ကြေးနဲ့ စွတ်ဝေဖန်နေတာပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီတော့ အမေစုခင်ဗျား အားကိုးပါရစေလို့ ဆက်ပြောပါရစေ…။
သဂျီးပြောစကား [[[[[[[မန်မာပြည်မှာ…စစ်ကိုမုန်းတဲ့… နိုင်ငံသားတိုင်း.. ထိပ်တန်းဦးစားပေးလုပ်ရမှာက.. ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးလို့ ထင်တာပဲ..။]]]]]] ကိုပဲ ပြန်ချပရရင် စစ်တပ်အုပ်စီးထားသ၍ ဘယ်တော့မှ ပြည်တွင်းစစ် အဆုံးမသတ်ဘူး။
လောလောဆယ်တော့ မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ အသံထွက်နေပြီ
ဆိုတော့ကာ ဒါက အခြေနေတစ်ခုပေါ်မှာ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့
မှတ်ပုံတင်တာနဲ့ေ၇ွးကောက်ပွဲက ဝင်ရမှာဘဲ ( သဘော )
ပြဿနာက ဟိုစစ်အုပ်စုသတ္တဝါတွေက ဘယ်လောက်ရိုးသားမှာလဲဆိုတာကတော့
( ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ် မတရားလုပ်လာရင် ဘယ်လိုဖြေ၇ှင်းမလဲ )
( ဒီမေးခွန်းရဲ့ ညီမျှခြင်းက NLD အနေနဲ့ မှတ်ပုံမတင်ရင် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ )
၇ှင်း၇ှင်းလေးဘဲ နည်းနည်းမှ မရှုပ်ဘူး
ထင်တာကိုပြောရရင် မှန်မှန်ကန်ကန်သာလုပ်ကြည့် NLD အနေနဲ့ တစ်ရေးနိုးထပြိုင်လည်း နိုင်မှာဘဲ
ဒီအခြေနေကို ဟိုသတ္တဝါတွေက သိထားပြီးသားဘဲ သိထားပေမဲ့
ဘာ့ကြောင့် NLD မှတ်ပုံတင်ရေးကို သူတို့အားစိုက်နေသလဲဆိုတာကို
( သူတို့ကိုယ်တိုင် တင်စေခြင်နေတယ်နော် )
ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ တင်ပြခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်
မြန်မာပြည်၏ အများစုသော ဆန္ဒတွေကတော့ မှတ်ပုံတင်မှ တရားဝင်ဖြစ်မှာတို့ ဘာတို့ပေါ့
မတရားလာရင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာကို မည်သူမျှ မေးခွန်းမထုပ်ထားတဲ့အတွက်
ပြည်တွင်းစစ် အဆုံးသက်ချင်ရင် လွယ်ပါတယ်..။
တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် မျှတတဲ့ အခွင့်အရေးတွေပါဝင်တဲ့၊
ပြည်သူတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်ခွပြီး အုပ်စုတစ်စုစုက နိုင်ငံရေးအာဏာယူမထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကောင်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာရင် ပြည်တွင်းစစ်တွေချုပ်ငြိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်..။
တကယ်တော်တဲ့သူတွေ လွှတ်တော်ထဲရောက်ပြီး မိမိဒေသ၊ လူမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်..။
အမေရိကန်သမ္မတဟာ သူ့နိုင်ငံရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သော်လည်း ဥပဒေကို သူ့စိတ်ကြိုက်မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ မကြာခင်က အိုဘားမားတင်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကို လွှတ်တော်ကအတည်မပြုခဲ့ပါဘူး..။